Kyeemyindaing Township Archives - Home Myan
အရှေ့ဘက်တွင် စမ်းချောင်းမြို့နယ်၊ အနောက်ဘက်တွင် အလုံမြို့နယ်၊ မြောက်ဘက်တွင် ကမာရွတ်မြို့နယ်နှင့် လှိုင်သာယာမြို့နယ်တို့တည်ရှိသည်။ အနောက်ပိုင်းတက္ကသိုလ်၊ အနောက်ပိုင်းဆေးရုံ၊ အထက်ကြည့်မြင်တိုင်လမ်းမကြီးပေါ်တွင် ဈေးဝယ်စင်တာများပါသော အထပ်မြင့်ကွန်ဒိုမီနီယံများ ထင်ရှားသည်။
တိုင်း/ပြည်နယ် (Region)	Ayeyarwaddy Region Bago Region Bee Lin Township Chin State Kachin State Kayar State Kayin State Magway Region Mandalay Region Mon State Naypyitaw Rakhine State Sagaing Region Shan State Tanintharyi Region ရန်ကုန်တိုင်း
အိမ်ခြံမြေအမျိုးအစား (Type)	Apartment	Condo	Hostel	House	Industrial Zone/ Warehouse	Land/ Plot	Pre Order	Rent Foreigner	Shop/ Office
Location: Kyeemyindaing Township
ဟုမ်းမြန်ဒေါ့ကွန်း (homemyan.com) ဆိုသည်မှာ နောက်ဆုံးပေါ်လာသော အိမ်ခြံမြေ၊ ရောင်းဝယ်ငှားသော အွန်လိုင်း ၀က်ဘ်ဆိုဒ် တစ်ခုဖြစ်ပါသည်။ *home ဆိုသည်မှာ “အိမ်ခြံမြေ” များကို ကိုယ်စားပြုပြီး “myan” ဆိုသည်မှာ “မြန်မာ” ကို ကိုယ်စားပြုပါသည်။ “မြန်ဆန်ခြင်း” ဟူသော အဓိပ္ပါယ်အရ ဤ၀က်ဘ်ဆိုဒ်ထဲတွင် မိမိသိလိုသော အချက်အလက်အားလုံးကို မြန်ဆန်စွာ သိနိုင်သည့် အကျိုးကျေးဇူး ရရှိပါမည်။ မြန်မာနိုင်ငံတစ်ဝှမ်းလုံးရှိ အိမ်ခြံမြေ ရောင်းချ/ ငှားရမ်းလိုသူများ “အခမဲ့” ကြေညာများကို မိမိဘာသာ လွယ်ကူစွာ တင်နိုင်/ ပြင်နိုင်/ ဖျက်နိုင်ပါသည်။ ၀ယ်ယူလိုသူ/ ငှားရမ်းလိုသူ များကလည်း ထောင်နှင့်ချီ၍ တင်ထားသော ရောင်းရန်/ ငှားရန် ကြော်ငြာများကို (တိုင်း/ ပြည်နယ်/ မြို့နယ်နှင့် အမျိုးအစားအလိုက်) လွယ်ကူစွာ ရှာဖွေ ကြည့်ရှုနိုင်သည့်အပြင် ရောင်းဈေး အပြိုင်အဆိုင် များအကြား အသက်သာဆုံး ဈေးနှုန်းကို တထိုင်တည်း နှိုင်းယှဉ် ရှာဖွေနိုင်သော အကျိုးကျေးဇူးကို ရရှိမှာ ဖြစ်ပါသည်။
ရန်ကုန်တိုင်း / Sorth Oakkalarpa Township
113 Views November 4, 2020
82 Views November 4, 2020
93 Views November 4, 2020
ရန်ကုန်တိုင်း / Mingalar Taung Nyunt Township
*** Rent the KanTarYar Residence ***
100 Views November 4, 2020
ရန်ကုန်တိုင်း / Bahan Township
For Rent ($500) Negotiate
119 Views September 22, 2020
For Rent ($550) Negotiate
97 Views September 22, 2020
ရန်ကုန်တိုင်း / Kyeemyindaing Township
ကြည့်မြင်တိုင်မြို့နယ် မြေညီတိုက်ခန်း အမြန်လျှော့ရောင်းမည်
139 Views July 29, 2020
520 Las, ၅၂၀သိန်း
ရန်ကုန်တိုင်း / Mayangone Township
ခြျောတှငျးကုနျး ကမ်ဘာအေးဘုရားလမျးမပျေါရှိ တိုကျခနျးငှားရနျရှိသညျ။
132 Views July 19, 2020
ရန်ကုန်တိုင်း / Botahtaung Township
ရတနာမွိုငျ Condo ရောငျးမညျ။
103 Views July 15, 2020
ရန်ကုန်တိုင်း / Pazundaung Township
121 Views July 15, 2020
LT1910006188: 3BR new unit for sale in Kantharyar Residence, Mingalar T/N
169 Views July 7, 2020
LT2007006633: Serviced Apartment for rent in Mayangone
131 Views July 7, 2020
ရန်ကုန်တိုင်း / Hlaing Township
LT2006006632: 3BR nice unit for sale in Hlaing
134 Views July 7, 2020
LT2006006631: 3BR nice unit for rent in Pyae Sone Chan Thar Condo, Hlaing
143 Views July 7, 2020
LT2006006607: 2BR unit for sale in Mahar Swe Condo, Hlaing
131 Views July 3, 2020
ရန်ကုန်တိုင်း / Sanchaung Township
LT2006006608: 4BR spacious unit for rent in Sunchaung
117 Views July 3, 2020
ရန်ကုန်တိုင်း / Kamayut Township
LT2006006610: 3BR unit for rent in Time City Condo, Kamaryut
127 Views July 3, 2020
LT2006006611: Landed house for sale in Mayangone
164 Views July 3, 2020
ရန်ကုန်တိုင်း / Thingangyun Township
LT2006006613: 2BR nice unit for Sale in Malikha Condo, Thingangyun
135 Views July 3, 2020
ရန်ကုန်တိုင်း / Yankin Township
LT2006006615: 2BR nice unit for Sale in Golden City Condo, Yankin
110 Views July 3, 2020
LT2006006616: 2BR nice unit for rent in Golden City Condo, Yankin
94 Views July 2, 2020
LT2006006617: 3BR unit for rent in Shwe Moe Kaung Condo, Yankin
147 Views July 2, 2020
LT2006006618: 2BR nice unit for rent in GEMS Condo, Hlaing
120 Views July 2, 2020
ရန်ကုန်တိုင်း / Mingalardon Township
LT2006006619: Land for sale in Mingalardone
144 Views July 2, 2020
ရန်ကုန်တိုင်း / Thanlyin Township
LT2006006620: 2BR unit for rent in Star City
133 Views July 2, 2020
ရန်ကုန်တိုင်း / North Dagon Township
LT2006006621: Landed house for rent in North Dagon
LT2006006622: 4BR penthouse unit for rent in Star City
115 Views July 2, 2020
LT2006006624: Studio room for rent in Crystal Residence, Kamaryut
ရန်ကုန်တိုင်း / Pabedan Township
LT2006006625: 3BR spacious unit for rent in Landmark Condo, Pabedan
LT2006006626: 4BR penthouse unit for sale in Star City Condo
183 Views July 2, 2020
LT2006006627: Brand new house for sale in Mayangone
132 Views July 2, 2020
LT2006006628:6storey Building for rent in Thingangyun
131 Views July 2, 2020
LT2006006630: 3BR unit for rent in Moe Sandar Condo, Kamaryut
108 Views July 2, 2020
ရန်ကုန်တိုင်း / North Oakkalarpa Township
*** ရောငျးမညျ ***
187 Views June 12, 2020
ရန်ကုန်တိုင်း / Sorth Dagon Township
*** လုံးခငျြးတိုကျ အား ရောငျးမညျ ***
141 Views June 11, 2020
186 Views June 8, 2020
*** ပွငျဆငျပွီး နှဈထပျတိုကျအား ရောငျးမညျ ***
177 Views June 6, 2020
Ayeyarwaddy Region / Hin Tha Ta Township
239 Views June 2, 2020
ရန်ကုန်တိုင်း / အ ရှေ့ဒဂုံမြို့နယ်
154 Views May 13, 2020
Industrial Zone/ Warehouse
New factory for rent
160 Views May 13, 2020
*** Rent the Central Condo ***
172 Views May 11, 2020
*** Sales the Central Condo ***
226 Views May 11, 2020
*** Rent the Condominium ***
153 Views May 4, 2020
*** Salet the Condominium ***
154 Views May 4, 2020
*** လုံးခငျြးတိုကျ အား ငှားမညျ ***
132 Views May 4, 2020
142 Views March 18, 2020
151 Views March 18, 2020
175 Views March 16, 2020
207 Views March 16, 2020
208 Views March 16, 2020
*** Rent the Home ***
176 Views February 29, 2020
150 Views February 28, 2020
175 Views February 28, 2020
*** Sales the Apartment ***
135 Views February 28, 2020
*** Sale The Home ***
154 Views February 27, 2020
**** For Sale ***
333 Views February 25, 2020
218 Views February 25, 2020
179 Views February 24, 2020
*** Sale the Apartment ***
158 Views February 23, 2020
*** Rent of Mini Condominium ***
189 Views February 23, 2020
*** လုပ်ငန်းလုပ်ရန် နေရာအား ရောင်းမည် ***
148 Views February 15, 2020
*** ရောင်းမည် ***
126 Views February 15, 2020
*** ငှားမညျ ***
172 Views December 23, 2019
*** Rent of Condo ***
501 Views December 14, 2019
*** ပြင်ဆင်ပြီး လုံးချင်းအိမ်အား ရောင်းမည် ***
249 Views December 14, 2019
*** ပြင်ဆင်ပြီး တတိယထပ် အား ရောင်းမည် ***
184 Views December 13, 2019
**** တိုက်ခန်း ပထမထပ် အား ရောင်း မည် ***
166 Views December 4, 2019
156 Views December 4, 2019
Mandalay Region / Pyin Oo Lwin Township
*** ပိုင်ရှင်ကိုယ်တိုင် ရောင်းမည် ***
288 Views December 3, 2019
161 Views December 3, 2019
182 Views December 3, 2019
228 Views November 30, 2019
Minthama condo for rent, mayangone town, yangon, myanmar Suitable for residential office
296 Views November 30, 2019
*** လုပ်ငန်းလုပ်ရန် သင့်တော်နေရာအား ရောင်းမည် ***
149 Views November 22, 2019
*** ဘုံမ္မာလမ်းသွယ်ရှိ မြေကွက်အား ရောင်းမည် ***
170 Views November 22, 2019
*** ဝေပုလ္လလမ်းသွယ်ရှိ လုံးချင်းအိမ် အား ရောင်းမည် ***
193 Views November 20, 2019
*** 15’x60′ ခြံနှင့်အိမ် ရောင်းမည် ***
171 Views November 20, 2019
*** ဘုံမ္မာလမ်းသွယ်ရှိ ခြံနှင့် အိမ်အား ရောင်းမည် ***
170 Views November 20, 2019
*** တိုက်ခန်း ရောင်းမည် ***
195 Views November 20, 2019
182 Views November 19, 2019
ဟုမ်းမြန်ရှိ နောက်ဆုံးတင်ထားသော အကျိုးဆောင်များ
GREAT PYI TAW THIT REALESTATE
01 450877,01 450944,09 409612022,09 73236717
Honor Real Estate_Freelance
09 79620 1406, 01 860 5255/56
Mother’s House.wn Real Estate Agency
09 433 23355
Myanmar Bizlinks Real Estate
Ma Mon Mon
Wint Htae War General Services
Myanmar United Land
09-950520499, 09-265388758, 09-457694311
LOGO မှ တဆင့် ကြော်ငြာများ
အခုပဲ အခမဲ့ ကြော်ငြာကို တင်လိုက်ပါ
ဟုမ်းမြန်ဒေါ့ကွန်း ဆိုသည်မှာ နောက်ဆုံးပေါ်လာသော အိမ်ခြံမြေ ရောင်း/၀ယ်/ငှားသော အွန်လိုင်းဆိုဒ်တစ်ခု ဖြစ်ပါသည်။
သတင်းလွှာ Email ရယူရန်
သတင်းလွှာများကို သင်၏ Email ဖြင့် ရယူရန် သင့် email ကိုထည့်သွင်းပါ..
* သင်၏ Email နှင့် အချက်အလက်များကို ပြင်ပသို့ မပေါက်ကြားစေရန် တာဝန်ယူပါသည်။
SHOWA ENTERPRISE CO,LTD.
25, Kyauk Kone St.
14 Qtr, Yankin Tsp, Yangon.
09 425108083 (Viber)
SHOWA ENTERPRISE CO., LTD.
၁၄ရပ်ကွက်၊ ရန်ကင်းမြို့နယ်၊ ရန်ကုန်။
KBZ BANK, U PYI SOE
Account No. – 007-301-00701-868201
© 2018 Home Myan Real Estate Portal. All Right Reserved.